I-Shuangliang iphumelele i-TUAS IWMF yeProjekthi yeZityalo zeNkunkuma eSingapore
Kutshanje, uShuangliang ufumene ileta yokwamkelwa (i-LOA) evela eSingapore ST Marine ngokubhekisele kunikezelo lokubhida nge-condenser yomoya opholileyo kwi-TUAS IWMF yeprojekthi yokulahla inkunkuma. Iprojekthi ibekwe eSingapore kunye nesixa-mali esiphumeleleyo malunga ne-CNY ye-48 yezigidi (ngaphandle kwerhafu). TUSA ndi ...
UKUQHUTYELWA KWEZEMPUMELELO KWE-SHELL & TUBE HEAT EXCHANGER TO HEC
Ekuqaleni kukaJan 2021, uShuangliang Eco-Energy uhambise ngempumelelo iiyunithi ezimbini zeCycle Gas Coolers ezivela kumzi-mveliso, egqibezela isithembiso sokuhambisa kumthengi: HEC (IHyundai Engineering Co, Ltd.), ongoyena mkhulu wehlabathi Ii-EPC ezinekomkhulu lazo eKorea kunye ...
Intsebenziswano enzulu phakathi kweShuangliang neMoutai
UMoutai, yenye yeempawu zotywala ezidumileyo eTshayina nakwihlabathi liphela. Utywala baseTshayina kuZwelonke. Umsebenzisi weemveliso ezininzi zeShuangliang. Kutshanje, iShuangliang Eco-Energy inikezele nge-mega ye-mega “yeProjekthi yoPhuculo loKhuselo lokusiNgqongileyo yoKwenziwa ngokutsha kwezinto ebesezisetyenzisiwe zaManzi apholileyo eMou ...
Nge-Sep 17, iShuangliang Eco-Energy yaphumelela i-2020 yaseTshayina yahambisa Amandla aGqwesileyo eProjekthi yeBhaso. Lo ngunyaka wesixhenxe ulandelelana ukuba uphumelele ibhaso. Iprojekthi ezuze amabhaso iShijiazhuang People's Hospital yiCCHP isasaza iprojekthi yamandla esekwe kwirhasi yendalo. Umdibaniso ...
Kwakhona, iShuangliang Group yadweliswa e-China ama-500 amaShishini abucala ngo-2020, ebeka i-224 ngengeniso yokuthengisa i-CNY 39.6 yezigidigidi ngo-2019. Imiselwe phantse iminyaka engama-40, iShuangliang Group itshintshiwe ukusuka kumenzi wezixhobo ze-AC ukuya kwiinkampani ezinkulu zeqela, ishishini lihluka ...
INkomfa yomthengisi we-Nokia
IShuangliang Eco-Energy yanikezelwa “ngokugqwesa kubumbano lomgangatho” kwiNkomfa yabaNikezeli bezaMandla i-Siemens kwaye yayinguye kuphela umthengisi ophambili owaphumelela eli Mbasa loMgangatho. Umnumzana Wang, Umphathi Jikelele weCandelo loTshintshiselwano ngezoBushushu, wamenywa ukuba azimase le nkomfa. Shuangliang Eco -...
Ukuhlolwa kwemveliso yokhuseleko
Amanyathelo okhuseleko abaluleke ngokukodwa ngexesha lobushushu obuphezulu ngo-Agasti. Kutshanje, uShuangliang wenze uhlolo olukhulu kwimveliso, wenza uphando malunga neengozi kunye neengozi ezifihliweyo, kunye nemveliso yokhuseleko kunye noqeqesho lolawulo lokhuseleko. // //
Intlanganiso yokutshintshiselana ngobuGcisa boBugcisa boMbutho weShuangliang wenzululwazi netekhnoloji
Amandla okuzimela ngokuzimeleyo ahambelana nophuhliso oluzinzileyo lweshishini. Ukususela ekusekweni kwayo, Shuangliang ubeke izinto ezintsha zeteknoloji kuqala kwaye incamathela kubaluleke kakhulu kwiitalente zobugcisa kunye nophando lobuchwepheshe. Kutshanje, uMbutho weTekhnoloji ye-Shuangliang ...
China Umbane woLwakhiwo lwaMandla oNzululwazi neTekhnoloji yeBhaso
Olunye uzuko kuShuangliang Ukupholisa okomileyo, nguMbutho woLwakhiwo lwaMandla oMbane waseChina （CEPCA） ， ngegalelo lokuphuculwa kwetekhnoloji yokuvelisa amandla. Itekhnoloji ekhokelayo yokupholisa eyomileyo inandipha udumo oluphezulu kwizityalo zamandla kwihlabathi liphela. // // // // //
I-China Power Power Science kunye neTekhnoloji yeNkqubela yeTekhnoloji
ngomphathi ku 20-05-19
Kutshanje, iprojekthi ka-Shuangliang 'yeTekhnoloji yokuSebenzisa kunye nokuSebenzisa ukuBonelela ngoBushushu boMbane kunye neMali yokuFunwa kweMfuno' iphumelele i-2019 China Power Power Science kunye neNkqubela phambili yeTekhnoloji. Okwangoku, kukho ngaphezulu kwe-60 CHP yezityalo kunye neeprojekthi ezili-100 ezisebenzisa ukufakwa kweShuangliang ...
Ukupholisa umoya kuthatha inxaxheba kuqulunqo oluqhelekileyo lomzi mveliso
ngomphathi ku 20-05-15
Njengenkampani ekhokelayo kwitekhnoloji yokupholisa eyomileyo e-China, i-Shuangliang ithathe inxaxheba ekwenziweni nasekuphononongweni kweMigangatho yeSizwe yezoShishino yeNkqubo yokuPholisa ngokungangqalanga kunye nemveliso, eya kuthi yenziwe ngokusesikweni ngo-Okthobha u-1, ngo-2020. Ukuza kuthi ga ngoku, uShuangliang ubonelele ngaphezulu 400 ...
Kuqala'UkuSebenzisa kwaManzi iNkqubo ye-CHP 'kwiLATAM
ngomphathi ku 20-04-17
Nge-Januwari 2020, uShuangliang wayifaka ngempumelelo i-'Zero Water Consumption CHP System '(ZWCCHP) kwingingqi yeLATAM. I-ZWCCHP yinto entsha kunye nophuculo olusekwe kwinkqubo yemveli ye-CHP. Ngelixa 'amandla okusebenza' kunye 'nobuhlobo bokusingqongileyo' njengezona zinto zibaluleke kakhulu kwi-CHP ...